Ukuya eHawaii ngaphandle kwezithintelo kwiindwendwe
Ikhaya » Iindaba Zokuhamba eHawaii » Ukuya eHawaii ngaphandle kwezithintelo kwiindwendwe
IHawaii yaziwa njenge Aloha Urhulumente. Ibingumzekelo kwihlabathi xa kufikwa kukhuseleko kulo lonke ubhubhane we-COVID-19.
Urhulumente usebenza ekwenzeni Aloha Urhulumente unokufumaneka kuzo zonke iindwendwe kwakuba kugonyiwe iipesenti ezingama-70 zabo bonke abahlali. Oku kunokuba ziiveki nje ezimbalwa kude. Okwangoku, ezinye izithintelo zokuhamba ziya kususwa nge-15 kaJuni.
Okwangoku ngaphezulu kwepesenti ezingama-50 zabo bonke abantu abahlala eHawaii bagonyiwe ngokupheleleyo.
Ukuqala nge-15 kaJuni, uhambo lwe-interisland luya kufumaneka ngaphandle kwezithintelo.
IHawaii izakuhamba kuhambo olungenasithintelo kuye wonke umntu.
IRhuluneli yaseHawaii uDavid Ige namhlanje ubhengeze inyathelo "loKhuseleko oluKhuselekileyo" lokuthintela uhambo ukuya Aloha Urhulumente uya kususwa, nje ukuba iipesenti ezingama-70 zabo bonke abahlali baseHawaii bagonywe ngokupheleleyo. Ngeli xesha, ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 zigonyiwe eHawaii.
Nje ukuba iipesenti ezingama-70 zabo bonke abahlali zigonywe, zonke iimfuno zokunxiba imaski kubandakanya nezangaphakathi ziya kuphakanyiswa.
Ukuqala nge-15 kaJuni, ukuhamba phakathi kweziqithi kuya kwenziwa kungabikho zithintelo.
Nje ukuba kugonywe iipesenti ezingama-55 zabo bonke abahlali baseHawaii, abahlali abagonyiweyo baya kuba nakho ukuya kwamanye amazwe ase-US kwaye babuyele eHawaii ngaphandle kokuvavanywa kwakhona. Oku kulindeleke ukuba kuqale ngoJuni 15, 2021.
Nje ukuba iipesenti ezingama-60 zabo bonke abahlali baseHawaii bagonywe, wonke umntu, kubandakanya nabakhenkethi, abagonywe ngokupheleleyo banokuya eHawaii ngaphandle kovavanyo olongezelelweyo.
Nje ukuba iipesenti ezingama-70 zabo bonke abahlali baseHawaii bagonywe, zonke izithintelo zokuhamba kurhulumente ziya kuphakanyiswa, kuvulwe Aloha Chaza imeko yokuhamba nokhenketho njengoko kwakunjalo ngaphambi kobhubhane.
Irhuluneli yaseHawaii ibhengeze uninzi lweendawo zokutyela kunye nabarhwebi abaza kuthi banike amaxabiso awodwa kwiindwendwe ezigonyiweyo ngenyanga kaJuni.
Irhuluneli u-Ige, nangona kunjalo, walumkisa loo nkululeko inokuthintelwa ukuba ubhubhane luqala ngendlela engalindelekanga.
Iinqwelo-moya zaseHawaii ziya kunikela nge-1 yezigidi zeemayile ukuba zinikwe umhlali onethamsanqa oza kugonywa kurhulumente.
Ukuphakanyiswa kwezithintelo kusebenza kuphela kukhenketho lwasekhaya lwase-US.